ओली विरुद्ध कडारुपमा संघर्षमा उत्रिन देशभरका कार्यकर्तालाई माधव नेपालको अपिल ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ओली विरुद्ध कडारुपमा संघर्षमा उत्रिन देशभरका कार्यकर्तालाई माधव नेपालको अपिल !
ओली विरुद्ध कडारुपमा संघर्षमा उत्रिन देशभरका कार्यकर्तालाई माधव नेपालको अपिल !
चैत १६ गते, २०७७ - १८:११
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भीम बहादुर रावललाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही गरेपछि आक्रोसित नेपालले केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान चलाइने बताएका छन् । उनले देशैभरिका कार्यकर्ताहरुलाई मैदानमा उत्रन आह्वानसमेत गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले सोमबार माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै नेता नेपालको आक्रामक प्रतिक्रिया आएको हो । नेता नेपालले केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष नरहेकाले आफुलाई कारवाही गर्ने कुनै अधिकार नरहेको बताएका छन् । ओलीले आफैं केन्द्रीय कमिटी भंग गरेको अवस्थामा यसरी कारवाही गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
ओलीले निलम्वन गरेको पत्र आफूले नपाएको बताउँदै नेता नेपालले अब देशव्यापीरुपमा ओलीविरुद्ध उत्रन कार्यकर्ताहरुलाई आह्वानसमेत गरे । नेपालले भने, ‘अब देशव्यापीरुपमा संगठन झनै सशक्त र प्रभावकारी भएर जान्छ । केपी ओलीको चुनौतीको सामना गरिन्छ । सबै कार्यकर्तालाई दृढताका साथ मैदानमा उत्रन म आह्वान गर्न चाहन्छु ।’
ओलीको कदम विरुद्ध चैत ४ र ५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको माधव समूहले ओली विरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर र समानान्तर कमिटी गठन गर्दै आएको छ । पार्टीले सोमबार निलम्बन गरेपछि एमाले अब फुटको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीभित्र रहेर संघर्ष गर्ने बताउँदै आएका नेपाल समूह पार्टीले कारवाहीपछि उनको समूह कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने कुरा निकै चासोकासाथ हेरिएको छ ।
चैत १६ गते, २०७७ - १८:११ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएका सर्वदलीय बैठकमा काेराेना रोकथाम, उपनिर्वाचन र संसद्को विजनेशका विषयमा विशेष छलफल